FBC - Itiyoophiyaa fi Norweey dhimma godaansaa fi qabiinsa baqattootaa irratti wal-tumsanii hojjachuuf waliigalan
Itiyoophiyaa fi Norweey dhimma godaansaa fi qabiinsa baqattootaa irratti wal-tumsanii hojjachuuf waliigalan
Finfinnee, Amajjii 4, 2010 (FBC) Itiyoophiyaa fi Noorweey dhimma godaansaa fi qabiinsa baqattootaa irratti caalaa walitti-dhihaatanii wal-tumsanii hojjachuuf waliigaluunsaanii ibsame.
Ministira Deetaan Dhimma Alaa Aadde Hiruut Zammanaa Ministira Baqattoootaa fi Wal-ta’iinsaa Noorweey Siilvii Listaawigiinin guyyaa kaleessaa waajjira isaaniitti simatanii waliin mari’ataniiru.
Aadde Hiruut wayita kana godaansi ajandaa addunyaa keenyaa ta’uu ibsanii, kunis biyyoota hedduu irratti dhiibbaa uumaa jira jedhaniiru.
Kanaaf furmaatni isaa ka’umsa godaansaa hiikuu akka barbaachisuu fi kanaafis mootummoota gamtoomaniitti, Gamtaa Afriikaa fi gama dhaabbilee kaaniin kallattiiwwan gara-garaa baasuun socho’uu akka barbaachisu himaniiru.
Itiyoophiyaan Afriikaatti baqattoota simachuun adda-duree ta’uushee ibsanii, kana imaammata kaampii haaraa banuun gocha fakkeenyummaa qabu raawwachaa kan jirtu ta’uu ibsaniiru.
Mirgi baqattootaa akka hin-sarbamne, dhiheessiin barbaachisan akka guutaman, carraa barnootaa akka argatanii fi biyyattiitti carraan hojii akka isaanii uumamu Itiyoophiyaan hojjataa kan jirtu ta’uu ibsaniiru.
Baatii Sadaasaa 2010 Dhaalaan Mootii Noorweey Hakoon Maganuus daawwannaan Itiyoophiyaatti taasisan hariiroon biyyattii dameelee gara-garaan cimaa dhufuusaa kan argarsiisu ta’uu ibsanii, kanas Itiyoophiyaan gaariitti akka ilaaltu himaniiru.
Adeemsa nagaa Sudaan Kibbaaf gumaacha ijaraa Noorweey gumaachiteef Aadde Hiruut galateeffataniiru.
Ministirri Baqattootaa fi Walta’iinsaa Noorweey Siilvii Liistaawgin gamasaaniin Itiyoophiyaan baqattoota simachuuni fi carraaqii godaansa seeraan-alaa ittisuuf taasisaa jirtu dinqisiifataniiru.
Biyyisaanii dhimma baqattootaa fi qabiinsa baqattootaa irratti Itiyoophiyaa fi biyyoota Yuuroop kaan waliin tumsitee hojjachuuf qophii ta’uushee ibsaniiru.
Keessumaa daddabarsa seeraan-alaa namootaa too’achuu fi seeratti dhiheessuuf carraaqii waliinii akka barbaachisu Ministirittiin himuusaanii odeeffannoon Waajjira Dubbi-himaa Ministeera Dhimma Alaa irraa arganne ni-eera.
Oduuwwan Biroo « Finfinneetti ijaarsi piroojaktoota daandii haaraa 16 olii jalqabamuufi	Daandiin Saffisaa Finfinnee Adaamaa babaqaquu waan jalqabeef KM 27 isaa suphamaa jira »